Cube Escape: Paradox 1.1.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.1.3 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား စြန္႕စားခန္း Cube Escape: Paradox
Cube Escape: Paradox ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားစုံထောက် Dale Vandermeer သည်သူ၏အတိတ်၏မည်သည့်စာမျက်နှာမပါဘဲတစ်ဦးနိမိတျဆိုးခန်း၌နှိုးသောအခါသူမကြာမီကိုယ်တော်တိုင်ဟောင်းရန်သူများကကြိုးကိုင်နေတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဂိမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွေ့။ Dale အခန်းထဲမှာလွတ်မြောက်ရန်နှင့်သူ၏အမှတ်တရများကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန် ပို. ပို. စိန်ခေါ်မှုပဟေဠိဖြေရှင်းပေးရပါမည်။
- တစ်ဦးကမူထူးခြားတဲ့,-မတိုင်ခင်ဘယ်တော့မှ-မြင်ဂိမ်း / ရုပ်ရှင် crossover အတွေ့အကြုံကို
- အကိုစုပ်ယူဂိမ်း, လေထုနှင့်ပဟေဠိ၏စည်းစိမ်ကိုပရိတ်သတ်တွေဒသမ Cube Escape ဂိမ်းကနေမျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ်
- Paradox နှင့်အတူဆက်သွယ်မှုများနှင့်အပြန်အလှန်၏တစ်ဦးကတစ်တန် - တစ်ဦးက rusty ရေကန်က Short ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
- မျိုးစုံနောက်ဆုံးတွင်နှင့်အတူ (အခမဲ့အဘို့တယောက်နှင့်တယောက်ပရီမီယံ) မရရှိနိုင်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကြီးရှိလိမ့်မည်
- လှပသောပန်းချီကား Johan Scherft အားဖြင့် handmade
- ဗစ်တာ Butzelaar အားဖြင့်ဗတ္တိဇံနှင့်လေထုတေးသံ
- ဘော့ Rafferty နှင့်ခဲမင်းသားသည်ဒါဝိဒ်ပန်းကန်များကအစွမ်းထက် Voice-over
- 14 ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများကိုပံ့ပိုးပေးခြင်း
Cube Escape: Paradox သည့် Cube Escape စီးရီးဒသမဇာတ်လမ်းတွဲနှင့် rusty ရေကန်ပုံပြင်တစ်ခုဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတစ်ကြိမ်မှာ rusty ရေကန်တစ်ဦးခြေလှမ်း၏နက်နဲသောအရာဆက်ရေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်အသစ်သောအကြောင်းအရာများအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း RustyLake.com စစ်ဆေး!
တူ, လိုက်နာရန်နှင့် subscribe:
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/rustylakecom
Instagram ကို: https://www.instagram.com/rustylakecom
Cube Escape: Paradox အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Cube Escape: Paradox အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Cube Escape: Paradox အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Cube Escape: Paradox အား အခ်က္ျပပါ
anoses စတိုး 5.14k 813.35k
Cube Escape: Paradox ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Cube Escape: Paradox အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Rusty Lake
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.rustylake.com/privacy-policy/
App Name: Cube Escape: Paradox
Release date: 2019-01-02 01:42:53
လက်မှတ် SHA1: 82:83:60:AF:35:AE:D7:90:DB:89:B9:CA:40:64:53:58:D6:ED:44:80
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Rusty Lake
အဖွဲ့အစည်း (O): Rusty Lake
Cube Escape: Paradox APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ